တရုတ်အားကစားဒူးထောက်ခြင်းအင်္ကျီလက်များသည် neoprene အလေးမအားစက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများအတွက်ပြင်ဆင်ပေးသည် ကွမ်းခြံကုန်း
အားကစားဒူးထောက်ခြင်းအင်္ကျီလက်များသည် neoprene ကိုယ်အလေးချိန်အားတက်စေသည်
အသွင်အပြင်:ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု, ဒူးထောင့်, elastic, ရှူရှိုက်, နူးညံ့သော
ပို့ဆောင်မှုအသေးစိတ်:ဖောက်သည်များငွေပေးချေပြီးနောက်4ရက်
ထုတ်ကုန်အမည်:အားကစားဒူးထောက်အပျော့အကျီင်္အင်္ကျီများသည် Neoprene Weightl
ထုပ်ပိုးခြင်း -opp အိတ်သီးခြား
ဒူးထောက် အလွန်ပါးလွှာသောပရိုဖိုင်းအားကစားသမားသို့မဟုတ်အဝတ်အစားနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒူးထောက်အမျိုးမျိုးသောဖှဲ့သိပ်သည်းမှု / အထူရာအရပျကိုထောကျပံ့ / flex လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်မှာ။ ဒူးနောက်ကွယ်မှအပို flex ။ဒူးဖိအားလက်ရှူရှိုက်နိုင်စွမ်း VS. စံ Neoprene ထုပ်ပိုး။ဒူးလက် neoprene ဓါတ်မတည့်သူများအတွက်ရိုးဆက်ရောင်ရမ်းနာ၊ ဒူးခေါင်း အပူထိန်းထားခြင်းမရှိဘဲချုံ့ခြင်းနှင့် fit အတွက်တိုးချဲ့နိုင်သည့် ၄ ဆလမ်း elastic ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအရိုးအထူးကုထုတ်ကုန်များတွင်ကျွမ်းကျင်သည် ဒူးထောက်။ ပံ့ပိုးမှု, ခါးနောက်ကျောသတ္တုတွင်းပံ့ပိုးမှု, ကိုယ်ဟန်အနေအထား Corrector, Wrist Brace Support, တံတောင်ဆစ်သတ္တုတွင်း ပံ့ပိုးမှုစင်တာ ခြေကျင်းသတ္တုအထိမ်းအချုပ် Support, Shoulder Brace ပံ့ပိုးမှု, လည်ပင်းသတ္တုတွင်းအထောက်အပံ့နောက် ... ပြီးတော့။ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်္ဂါရပ် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုမှာအကောက်ခွန်ဌာနမှဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ဒီဇိုင်းတံဆိပ်နှင့်အရောင်သေတ္တာဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူအချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်ရန်မျှော်လင့်နေကြသည်!
ပစ္စည်း: နိုင်လွန်, Spandex, Fiber အရွယ်အစား: S / M / L ကို အရောင်: အပြာရောင်၊ အနက်ရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်၊ အနီရောင်၊ အစိမ်းရောင် လုပ်ဆောင်ချက် - ဒူးကိုကာကွယ်ပါ၊ နွေးပါ၊ လုံခြုံပါစေ ဝိသေသလက္ခဏာများ:
၁ ၂။ ဒူးခေါင်းကသင့်ရဲ့ patella ကိုထောက်ပံ့ပေးတယ် 3. patella ကိုထောက်ပံ့ရန်ကူညီသည် 4. ဝတ်ဆင်ရန်အဆင်ပြေသည် ၅။ ဒီဇိုင်းသည်သင်၏လှုပ်ရှားမှုကိုမထိခိုက်ပါ ကောင်းသောဖိအားကသင်၏ဒူးကိုလုံးဝဖုံးအုပ်နိုင်သည် ၇။ နေ့စဉ် ၀ တ်ဆင်နိုင်မှုအတွက်နွေးထွေးမှု၊ နှစ်သိမ့်မှု၊ OEM: ရရှိနိုင် ထုပ်ပိုးခြင်း - opp အိတ်၊ စက္ကူကဒ်သို့မဟုတ်အမြောက်အများကိုဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အနေနှင့်သီးခြားထားပါ
ဒူးထောက်အင်္ကျီလက် Neoprene ထုတ်လုပ်သူနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူကိုရှာဖွေနေပါသလား။ သင်၏ဖန်တီးမှုကိုကူညီရန်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ဒူးအင်္ကျီလေးများအားလုံးသည်အရည်အသွေးအာမခံချက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ကတရုတ်မူလကဒူး Brace Neoprene စက်ရုံ။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားအခမဲ့ဆက်သွယ်ပါ။
ရေမြှုပ် pads ကိုတိုက်မှုန်ဒူးသတ္တုအထိမ်းအချုပ်
ချိန်ညှိ Patella သိုင်းကြိုးဒူး Brace
အဆင်ပြေပြီးအသက်ရှူ kneepad / ပုံသေဆန့်ကျင် ...